Ma Apple ee 5 GB Of Free iCloud Kaydinta la tegtaan u bixiyaan Sharafbadanyahay
Kaydinta Cloud ayaa fududeeyey nolosha dad badan. Iyada oo adeeg iCloud Apple ee, waxaad ku hayn kartaa wax badan oo ay ka mid yihiin files sawirada iyo xitaa documents in aad xisaabta iCloud.
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah dadka la soo dhacaya dib Apple ee iCloud kaydinta aawadood files ay badbaadiyo. Mid ka mid ah qaababka ugu fiican waa in marka aad soo iibsatay heeso, aad u fog oo ku hayn kartaa maktabadda song iyo muujinta u hagaagsan, waxa aad heli kartaa file ka mid ah qalabka ku xiran aad Apple oo dhan. Iyadoo iCloud ayaa adeeg heer sare ah, waa mid u nugul in ay qayb ka mid ah dhibaatooyinka. Waxaa jiray arrimaha markii caanka ka cabanaya in photos iyaga u gaar ah ayaa la xaday ka account iCloud. Si kastaba ha ahaatee, waqti isku mid ah, waxaa bixiya hab aad u wanaagsan oo ah helitaanka la mid ah files on qalabka waafaqsan si sahlan oo cajiib ah.
Dhawaan, Apple ayaa wararka sida, taasu waa qurbaan macaamiisha Greek iCloud helaan lacag la'aan ah muddo bil ah. Hubaal waxa tani waa caawimo wanaagsan sida dadka Gariigta ku dhaxjiraan dhibaato dhaqaale oo weyn la joogo.
Maamul iCloud Kaydinta
1. aad iPhone, guuraan tab goobaha ka dibna riix on iCloud.
2. Hadda, waxaad ka heli doontaa liiska fursadaha sida qaybsiga qoyska, meel la heli karo iyo Chine in ay yihiin ilaa xogta taageerto in aad xisaabta iCloud.
3. Waxaad u jiheysan karo in qaybta lagu keydiyo iyo sidoo kale dooran qorshe cusub (oo aad ku kici doona lacag) ama waxaad dooran kartaa in ay maareeyaan kaydinta iyadoo la tirtirayo xogta qaar ka mid ah.
4. Waxaad riixi kartaa 'maamuli kaydinta' doorasho oo aad ku arki doontaa liiska barnaamijyadooda kala duwan.
5. Waxaad isticmaali karaan on Chine gaar ah oo xogta aad rabto in ay nadiifiso.
6. Badanaa, nadiifinta sawirada aad ku caawin doona lacagta la taaban karo oo ah meel lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah.
7. Ka dib markii aad la sameeyo iyadoo talaabooyinkan, hubi in si aad u hubiso in auto iCloud ee gurmad u rogmatay on.
Ka dib markii talaabooyinkan kaa caawin doona inaad nadiifiso meel aad kaydinta iyo in ay la socdaan macluumaadka aad xoojiyaa.
Ma waxaad doonaysaa in ay baadhaan waxa kale oo aad doorataa ay marka ay timaado hadhaysaa kaydinta? Inkasta oo ay jiraan shaki ku jirin in iCloud fursadaa aad u ammaan, waxaa jira fursado badan oo kale oo xiiso leh iyo sidoo kale. Ha noo eegno qaar ka mid ah.
Waxay bixisaa 2 GB oo ah meel bannaan oo daruur si xor ah u user kasta oo dheeraad ah oo aad kordhiso kartaa boos lacag la'aan ah oo ay DropBox ku tilmaamayaa in dadka kale ee. Sida ugu badan ee dheeraad ah 16 GB oo ah meel bannaan oo lacag la'aan ah ayaa laga heli karaa. Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo taageerada dhammaan versions of nidaamyada hawlgalka.
• waddaa on dhow dhufto oo dhan
• Waa sahal in la kordhiyo kaydinta lacag la'aan ah u gudbinaayo saaxiibo
• Easy syncing iyo raalli dadka kale ee la wadaago
• nugul arrimaha ammaanka
• Hacker si fudud jebin karaa koonto DropBox aad oo ka xadaan xogta
Tani waa qalab cusub laakiin waxa ay u suurtagashay in ay sameeyaan ay joogaan dareemay. Waxaad ka heli 15 GB oo ah meel lagu kaydiyo lacag la'aan ah oo uu dhab ahaantii noqday halbeegyada cusub ee files leh users la wadaago.
• sanadeedkii 15 GB ee lagu kaydiyo oo bilaash ah
• Iskudhafid Easy la Gmail taas oo ka dhigaysa in aysan lagama maarmaan in la isticmaalo
• waddaa on fara badan versions OS kala duwan
• Taageerada badan oo fur-tago taas oo ka dhigi kartaa in ay aad u awood badan
• cusub oo dadka qaar ka mid ah waa ay ka shakisanyihiin isticmaalkiisa
• meel sarana u noqon kartaa wax aad u qaali ah
• Waxa aan doorbiday by kuwa aan isticmaali Gmail sida ay account mail hoose
Tani by Microsoft daruur kaydinta waa hubaal adeeg kale oo weyn oo waa in aad baadhaan. Waxaad ka heli 7 GB oo ah meel lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah ku dul ilaa saxiixa oo inkasta oo inta badan waxaa la dhisay madal Windows ah, waxaad sidoo kale taageero u OS kale ka heli kartaa.
• 7 GB oo ah meel bannaan oo lacag la'aan ah, 10 GB ee ardayda.
• Kuwa doortay si ay u rakibi markii ay wajiga beta helay 25 GB oo ah meel lagu kaydiyo oo bilaash ah
• Easy in uu kaydiyo faylasha iyo sii iyaga beehsa sida aad iyaga ka heli kartaa on go ah
• la jaan dhufto ee android iyo macruufka iyo sidoo
• Taageerada qalab kala duwan oo dhinac saddexaad oo isdiyaari, iyo sidoo kale
• interface ma aha user saaxiibtinimo
• Waqti ayay qaadan kartaa qaar ka mid ah qabsaneysa qaababka
Waa mid ka mid ah adeegyada kaydinta ugu caansan ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga. Waxaad ka heli 10 GB oo ah meel bannaan oo lacag la'aan ah aad shakhsi loo isticmaalo. Waa socon on dhufto ee kala duwan iyo sidoo kale.
• 10 GB oo ah lacagta lagu kaydiyo korkiisa kor u saxiixay
• haboon daydo ganacsi ganacsiga
• Waxaad gali kartaa oo kaliya files of size max 250 MB ee xisaabaadka shakhsiga ah
• Waxay noqon kartaa wax yar qaali ah si ay u iibsadaan boos dheeraad ah
Tani waa tan adeegyada daruur ugu fiican. Ay bixiyaan Apple, waa mid ka mid ah doorashooyinka kaydinta daruur ugu caansan. Waxaad ka heli 5 GB ee lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah.
• interface aad u fiican oo aysan waqti ma qaadataa qabsaneysa waa in
• 5 GB oo ah meel bannaan oo lacag la'aan ah oo lagu kordhin karaa
• nugul in weeraro ammaanka
• nugul khataraha
Kuwani waa 5 ka mid ah adeegyada kaydinta daruur ugu fiican. Waa kuwee mid aad u doorato?
Waa maxay Celebrity Photo daadin Na bar karaa h
> Resource > iCloud > Ma Apple ee 5 GB ee Free iCloud Kaydinta la tegtaan dalab Sharafbadanyahay?